Jurgen Klopp oo ka hadlay wararka la xiriirinaya shaqada xulka qaranka Jarmalka… (Miyuu ka tagi doonaa Kooxda Liverpool?) – Gool FM
Liverpool, Chelsea mise Barcelona, waa tee Kooxda iminka ugu cad-cad inay la wareegto Ciyaaryahan Saul Niguez?
Macallin Jose Mourinho oo awoodi waayay inuu Arsenal ku qanciyo inay ka iibiso Granit Xhaka & Laacibka uu beddelkiisa u dhaqaaqayo oo la ogaaday
Jurgen Klopp oo ka hadlay wararka la xiriirinaya shaqada xulka qaranka Jarmalka… (Miyuu ka tagi doonaa Kooxda Liverpool?)
Haaruun November 22, 2020
(Liverpool) 22 Nof 2020. Jurgen Klopp ayaa ka hadlay wararka la xiriirinaya xilka tababarennimo ee xulka qaranka Jarmalka, kaddib ceebtii weyneed ee xulka ka soo gaartay Spain tartanka UEFA Nations League.
Tababare Klopp ayaa hoos u dhigay arrintaas, waxaana uu soo jeediyey inuusan xiiseynaynin inuu shaqada xulka qaranka Jarmalka ka bedelo macallin Joachim Low, laakiin waxa uu sheegay inuu tixgelin lahaa shaqadaa marka waayihiisa Kooxda Liverpool ay dhamaadaan.Wararka la isla dhexmarayo ayaa sheegaya in Low uu wajihi karo in
shaqada laga ceyriyo kaddib natiijo niyad jab leh oo soo wajahay xulka markii ay 6-0 xasuuq ah kala kulmeen Spain horraantii bishaan tartanka UEFA Nations League.
Klopp ayaa si dabiici ah u noqon lahaa doorashada ah inuu doorkaas la wareego, laakiin 53-sano jirkaan ayaa had iyo jeer hoos u dhiga fikraddaas.
Mar la weydiiyay markale inuu tixgelin doono doorka macallinnimo ee xulka qaranka Jarmalka, tababaraha Reds waxa uu soo bandhigay jawaab diblomaasiyadeed.
Klopp ayaa Suxufiyiinta u sheegay: “Waxaan u maleynayay inay ka mid tahay su’aalaha aan ka jawaabo inta badan noloshayda!
“Mustaqbalka laga yaabee, hadda? Maya, waqti ma haysto, shaqo ayaan haystaa – shaqo qurux badan ayaa wadada ii saaran.
“Waxaan mas’uul ka ahay waxyaabo badan halkaan, marka ma aadi doono oo mana raadin doono tartan kale, waxaan haystaa caqabado igu filan kaddib markaan soo tooso Subixii!” ayuu hadalkiisa ku daray macallinka Liverpool ee Klopp.
"Waxay doonayeen inaan ku biiro Kooxda Chelsea" - Wayne Rooney oo shaaca ka qaaday inuu qarka u fuulay ku biirista Blues
Arsenal oo xiiseynaysa xiddig khadka dhexe kaga ciyaara Kooxda Real Madrid, xilli Arteta uu rabo inuu gacanta ku soo dhigo bisha Janaayo